'बेईमान र अबुझ मान्छेलाई नेता बनाएपछि यस्तै हुन्छ '
मंगलबार १०-१३-२०७७/Tuesday 01-26-2021/	12:01 pm
त्यत्रो वाहवाह पाएको नेता आज समाप्त भयो । यो देशको दुर्भाग्य हो कि यत्रो प्रयासपछि ठूलो बहुमत बोकेर जन्मिएको एउटा नेता संसारमा सबभन्दा काम नलाग्ने नालायक रहेछ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था भयो । अर्काले होइन, उनकै कर्मले उनी आफैंले प्रमाणित गरे ।
साविक पदमा बस्ने मान्छेलाई नागरिकले सोध्न पाउँदैन ? देशको न्यायाधीश भएकाले उहाँहरुका व्यवहार, चरित्रमाथि औंला ठड्याउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नै हुँदैन भन्दिन म । खुलेआम भेटे हुन्छ र, त्यो जनताले थाहा पाउनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्दछ । हामीले खोजेको पारदर्शीता हो, गुप्त मन्त्रणा होइन ।
जनता समाजवादी पार्टीले पत्याउँदैन, काँग्रेसले पत्याउँदैन । काँग्रेस र समाजवादी पार्टी सतर्क हुनुपर्ने बेला छ कि तत्कालको फाइदाका लागि चुक्नुहोला कि ? समाजवादी पार्टी अलि अगाडि नै छ, काग्रेस चाहिँ धरधर छ ।
संसद पुनर्स्थापनापछि पनि दंगदास भएर त्यतिमा सीमित हुनु हुँदैन । छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जानुपर्छ, केपी ओलीलाई फ्याँकेर चुनावमा जाने हो। वास्तवमा पार्टीहरुले विचार गर्नुपर्छ, केपी ओलीलाई अहिले सबैभन्दा बढ्ता वैधानिकताको संकट छ । नेपालको लागि संकट होइन । ओलीलाई वैधानिकताको संकट छ । संसद नभएका कारण मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता गुमाएको अवस्था छ । त्यो बेलामा उनलाई कसले सहयोग गर्छ ? विभाजित नेकपाबाट उनलाई सहयोग हुँदैन, यो त अझै धेरै विभाजित हुँदै जाने होला ।
मंगलबार काठमाडाैंमा जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटनबारे गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक प्रा. खनालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश
बुधबार २२ पौष, २०७७ १०:१३:०० मा प्रकाशित